Ciidamada dowladda iyo kuwa Koonfur Galbeed oo La Wareegay TIYEEGLOW - Hablaha Media Network
Ciidamada dowladda iyo kuwa Koonfur Galbeed oo La Wareegay TIYEEGLOW
HMN:- Ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed ayaa dib ula wareegay degmada Tiyeeglow ee gobolka Bakool, halkaasoo maalmo ka hor ay qabsadeen Al-Shabaab, kaddib markii ay isaga baxeen ciidamadii Itoobiya ee ku sugnaa.
Sida ay sheegayaan wararka ciidamada oo aanay wehlin kuwa Itoobiya ayaa u suura gashay inay qabsadaan deegaano u dhaxeeya Xudur illaa Tiyeeglow.
Wararka ayaa sheegaya in dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab oo ku sugnaa Tiyeeglow ay isaga baxeen, kaddib markii ciidamada dowladda iyo kuwa Koofur Galbeed ay ku soo dhowaadeen magaalada
Xildhibaan Ibraahim Xasan Buulle ayaa sheegay in ciidanka dowladda iyo kuwa Koofur Galbeed oo is kaashanaya ay la wareegeen Tiyeeglow, isagoo xusay in xalay Al-Shabaab isaga baxeen.
Waxaa uu sheegay in ciidamada ay horay u soo qabsadeen deegaanka Ceel Garas, haatan uu qorshahooda yahay inay nadiifiyaan Tiyeeglow oo ay guri guri baaritaan ugu sameeyaan.
Mas’uuliyiin ka tirsan maamulka Koofur Galbeed ayaa sheegay inay ka maarmi doonaan Ciidamo sheega, isla markaana ciidankooda oo keli ah la wareegayaan deegaanadii ay dhowana qabsadeen Al-Shabaab.